China Chaiwo Ruzivo rwe Screw fekitori nevatengesi | Tanso
Screw Uye Bharamu Yekuwedzera Machine
Conical Twin Screw Uye Inogoneka Conical Barrels
Parallel Twin Screw Uye Bharari
Imwe Chikwangwani Uye Bharamu
Kuzivikanwa Ruzivo rweScrew
Parizvino, zvigadzirwa zvinowanzoshandiswa pachigadzirwa muChina nde 45 simbi, 40Cr, ammoniated simbi, 38CrMoAl, yakanyanya kupisa alloy, nezvimwewo.
1) Kwete. 45 simbi inodhura uye ine yakanaka yekugadzirisa basa, asi kupfeka kwayo, kudzivirirwa koridhi uye kuramba kukwegura hakuna kunaka.
Kurapa kupisa: Yadzimwa uye yakatsamwa hb220-270, yakakwirira frequency quenching hrc45-48.
2) Iko kushanda kwe40Cr kuri nani pane iko kwesimbi makumi mana, asi inowanzoda kuiswa nekagadziko kromium kuvandudza kugona kwayo kwekuora uye kupfeka kupesana. Asi chinodiwa chromium plating layer iri pamusoro, iyo plating layer yakatetepa uye yakapfekwa kupfeka, yakanyanya kuwanda, zviri nyore kudonha kubva, asi mushure mekudonha inokurumidza kudzora kutu, iyo yave isinganyanyi kushandiswa.
Kurapa kupisa: kutsamwa hb220-270, yakaoma chrome yakaiswa HRC> 55
3) Nitriding simbi uye 38CrMoAl ine zvakazara basa rakawanda uye inoshandiswa zvakanyanya. Kazhinji, iyo nitriding layer iri 0.4-0.6mm. Asi iyi mhando yedata inogona kupesana nekuora kwehydrogen chloride nekudzika uye mutengo wakakwira.
4) iyo superalloy data yakakwirira kune imwe data. Iyo data haidi kuiswa. Mazhinji acho anoshandiswa mune halogen-isina musara muswe wejoini wokuumba machina. Iyo data ine yakakwira anti-oxidation, anti-corrosion uye anti-kukwegura mabasa, uye kupisa kurapa hra55`60.
Injection screw ino shanda pasi pekupisa kwakanyanya, yakanyanya kudzvanywa, yakakwira michina torque uye yakakwirira fashoni nharaunda kwenguva yakareba. Izvo zvekutanga zvishoma zvinhu zvinodikanwa nemaitiro mamiriro, uye kurasikirwa nekuda kwekukanganiswa hakugoneki. Kazhinji, chikwangwani chakange chakaiswa-nitridhi kuvandudza huoma hwemo, ndiko kuti, kugadzirisa dhayeti yekupfeka. Nekudaro, kana chikonzero chekupfeka chikasaraswa, kana kupfeka kwacho hakuna kuderedzwa zvakanyanya sezvazvinogona, hupenyu hwekushanda kwehurewo huchadzikiswa kwazvo.
Inotevera inotsanangura izvo zvinokonzeresa kupfeka uye nzira yekudzora kupfeka
1. Ipurasitiki yega yega ine tarisiro yekuita sisitimu yekushisa. Iyo pombi yekugadziridza tembiricha inofanirwa kudzorwa kuti ive padhuze nekushisa uku. Iyo granular epurasitiki inopinda mudhishi yekudya kubva ku hopper, uye ichatanga kusvika kune chikamu chekudyisa, icho chisingaratidzi kuratidza kuoma kwakasimba. Kana aya mapurasitiki ari kushaya kupisa uye kunyunguduka kusingaenzaniswi, zviri nyore kuti iite madziro emukati wembiya uye yekupfeka kwekunze kwehurefu. Saizvozvo, muchikamu chekusimbisa uye chikamu chehomogenizing, kana iyo mamiriro ekunyungudika epurasitiki akapunzika, ichaitawo kupfeka kwakawedzera.
2. Iyo inomhanyisa inofanira kugadziriswa nenzira kwayo. Nekuti mamwe mapurasitiki anowedzerwa neanosimbisa vamiririri, senge fiberglass, zvicherwa kana zvimwe zvinogadzirwa. Iko kupokana kwezvinhu izvi pane simbi zvigadzirwa zvinowanzo kuve zvakakura kupfuura izvo zvemapurasitiki akaumbwa. Mukukuvara kwemapurasitiki aya, kana kumhanya kwazvo kuchishandiswa, kuvandudzwa kwesimba rekucheka papurasitiki kunosimbisawo zvimwe zvakafanana zvakatsemurwa. Iyo shredded fibers ine unopinza magumo uye pfeka Yakasimba yekuwedzera. Kana zvisikwa zvicherwa zvichatsemuka nekumhanyisa pane simbi, kupshera kwavo hakuzi kushoma. Naizvozvo, kumhanyisa hakufanirwe kugadziridzwa kwakanyanya.
Nguva yekutumira: Jun-03-2020
UNO TANSO YAKO